LOAKAN’NY HAZAVANA NY AIZINA – filazantsaramada
LOAKAN’NY HAZAVANA NY AIZINA
Publié parfilazantsaramada	 octobre 18, 2013 Laisser un commentaire sur LOAKAN’NY HAZAVANA NY AIZINA
“Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao…” Isaia 60:1
Nilaza i Winston Churchill fa “ankamantatra mifono mistery ao anaty zava-miafina i Rosia”. Tahaka izany ny finoana Kristiana ho an’ny tsy mino, hoy i Paoly: “ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay an’ny Fanahin’Andriamanitra; fa fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria araka ny Fanahy no amantarana azy” (IKorintiana 2:14).
Miasa Satana hanatevina ny zava-miafin’Andriamanitra. tahaka ny hoe tsy ampy izany dia mbola nohalalininy ny mystery: “Nohajambain’ny andriamanitr’izao tontolo izao ny sain’ny tsy mino mba tsy hiposahan’ny fahazavan’ny filazantsaran’ny voninahitr’i Kristy, izay endrik’Andriamanitra”. (IIKorintiana 4:4). Vonoin’I Satana ny jiro manazava izao tontolo izao ary andramany tarihina ho any amin’ny aizin’ny fahajentilisana ny olona: fitiava-karena, fireharehana, fitondran-tena maloto. Nefa tsy izany no tokony ho izy. Azontsika atao ny manamafy ny Epifania, mangataka ny Fanahy Masina hanazava ny aizina sy ny fahaverezan-tsaina ary mivavaka mba hitohizan’ny fahazavana amintsika: “Ry Fanahy Masina, hazavan’Andriamanitra, hazavao ny fanahiko”.
Mbola miahy antsika Andriamanitra: “Izy no mandidy ny mazava hampahazava ny fontsika” mba hanekentsika Azy ho an’ilay Andriamanitra marina; andramo, ka izahao ny heriny tsitoha, ny fahendreny, ny voninahiny sy ny fanjakany, ary fantaro Izy amin’ny maha Ray fitiavana Azy eo amin’i Jesosy Kristy.
Miala avokoa ny zava miafina manodidina an’Andriamanitra eo am-pijerena ny endriky ny Zanany tonga nofo. Tsy hitantsika amin’ny mason’ny nofontsika ny fitiavany omeny antsika. “Tsy nisy nahita an’Andriamanitra na oviana na oviana; fa ny Zanaka lahitokana Izay ao an-tratran’ny Ray, Izy no manambara Azy” (Jaona 1:18).
Publié parfilazantsaramada octobre 18, 2013 Publié dansUncategorized
Tolo-tanana ho fampitaovana ny asa fitoriana